Top Senuti maka Windows Ngwaọrụ naghachi Music si iPhone na iPod
> Resource> Nyefee> Top Senuti maka Windows Mmemme naghachi Music si iPhone na iPod
Senuti bụ obere ma na-enye aka ngwá ọrụ iji nyere ọrụ naghachi music, listi ọkpụkpọ, na video si iPods na iPhones. Mepụtara na 2004, ya enyerela ọtụtụ nde ndị ọrụ iji nweta music si iPods na iPhones azụ iTunes Library. Na-ekwu, hoo haa, ọ bụ a kwesịrị maka iPod na iPhone ọrụ na-aka music. Otú ọ dị, Senuti ugbu a nanị na-agba na Mac OS X 10.5 na mgbe e mesịrị. Ọ bụrụ na ị a Windows njirimara, i nwere ike iji na Mac version Senuti, ma a Windows Senuti usoro. Dabara nke ọma, e nwere ọtụtụ nhọrọ ị nwere ike họrọ si:
# 1. Senuti maka Windows Program- Wondershare TunesGo
# 2. Senuti maka PC Nyefee - SynciOS iPod Nyefee
# 3. Senuti maka Windows - PodTrans
Rover Songs si iPod na iPhone na Senuti maka Windows
# 1. Best Senuti maka Windows Ngwá Ọrụ - Wondershare TunesGo
The Best Senuti maka Windows Pro bụ Wondershare TunesGo. Gịnị mere m na-ekwu na? Wondershare TunesGo ọrụ yiri ka Senuti - agbake music na listi ọkpụkpọ site na iPod na iPhone, na-ha azụ iTunes Library. Ma, e wezụga na, TunesGo ohere ọrụ idetuo music na listi ọkpụkpọ na Fim, play adabere, na artwork, wdg ka iTunes Library na nanị 1 Pịa. Na Wondershare TunesGo ohere ọrụ idetuo songs, listi ọkpụkpọ, videos, iTunes U, pọdkastị, foto, na ọzọ ka ọrụ 'na kọmputa. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọrụ arụnyere Wondershare TunesGo na kọmputa nke bụ bụghị onye na-eji ka mmekọrịta na ọrụ iPhone ma ọ bụ iPod, ọrụ ike na-etinye music ozugbo na iPhone ma ọ bụ iPod enweghị erasing mbụ data. Olee otú ịtụnanya ọ bụ! Ọ na-akwado niile iPods, iPhones na iPads dabeere iOS 5 na mgbe e mesịrị.
Ị nwere ike ibudata free ikpe mbipute hụ otú ọ na-arụ ọrụ Windows PC!
SynciOS iPod transfer, dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ a Senuti maka Windows omume dị ka mma. Ọ na-enyere ndị ọrụ na-nyefee media faịlụ, dị ka music, pọdkastị, video, iTunes U, wdg na kọmputa. Ma ọ nwere ike adịghị nyefee music na listi ọkpụkpọ ozugbo na iTunes Library. Ka naanị foneelu na duplicated songs. Mgbe iji SynciOS iPod transfer iji nweta music na PC gị na, ị ga-mkpa ka ịgbakwunye ha gị iTunes Library. Adịghị m chọta Ama na ya website maka nkwado iTunes 12 na ọhụrụ iOS 9. Ị nwere ike na-agbalị ya iji hụ ma gị Apple ngwaọrụ a na-akwado ma ọ bụ.
PodTrans bụ a Senuti Ẹkot maka Windows ọrụ. Ọ na-akpan mepụtara maka iPod ọrụ nyefee music si PC ka iPod na Anglịkan. Ugbu a ọ na-akwado ndị ọhụrụ iPod nano 7 na iPod aka 5. Dị ka SynciOS, nanị ihe ọ idetuo music si gị iPod na kọmputa, ọ bụghị ka iTunes Library. Ya mere ọ bụrụ na ị na-aga na-agbalị ya, ị ga-tinye songs na kọmputa gị ka gị na iTunes Library aka. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee music na gị na iTunes Library, ị kwesịrị ị na-emefu ole na ole ebu iji kwalite ka PodTrans Pro.